Home /सूचना/प्रविधि/पढौं गौतम बुद्धका अमृतवाणी
भगवान् गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मका प्रणेता हुन् । अधिकांश बौद्ध परम्पराले उनीलाई हाम्रो कल्पका एक सम्यक सम्बुद्धको रूपमा मान्दछन् । बुद्धभन्नाले बोधिप्राप्त वा अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गरेको महामानव बुझिन्छ । बुद्ध कहलाईनु अघि यिनको नाम सिद्धार्थ गौतम थियो । यिनीलाई शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पनि भनिन्छ ।
उनले मानव जीवनलाई अर्थपूर्ण र उपयोगी बनाउने विभिन्न उपदेश दिएका छन् । त्यस्तै उपदेशमध्ये यी केहि उपदेश हुन् जसले तपाईको दृष्टिकोण नै फेरिदिनेछन्।
गौतम बुध्दसंगै सम्बन्धित एउटा कथा-
एक दिन गौतम बुद्धको शरणमा एउटा युवक अति नै दुःखी हुँदै आएछ। अनि बुद्धले सोध्नुभएछ, “के भयो?”
त्यस युवकले भने, “हजुर, हिजो मेरा पिताको मृत्यु भयो। त्यसैले आज हजुरसँग एउटा अनुरोध गर्न आएको। जब कुनै साधारण पुजारीले अन्तिम संस्कार गर्दछ, तब आत्मा स्वर्गमा पुग्ने मौका पाउँदछ। हजुर त महान् हुनुहुन्छ, हजुरजस्तोले मेरा पिताको संस्कार गरिदिनुभयो भने, उहाँले स्वर्गमा पुग्ने मौका मात्र होइन सायद स्वर्गमै सदा बस्ने मौका पाउनुहुन्छ होला। त्यसैले प्रभु! बिन्ती छ, मेरा पिताको लागि यत्ति गरिदिनुहोस्।”
युवक पनि खुसी हुँदै घैँटा किन्न गए, यो सोँचेर कि अब बुद्धले कुनै किसिमको विशेष संस्कार गर्नेछन्। दुईवटा घैँटा किनेर ल्याएपछि बुद्धले त्यस युवकलाई एउटा घैँटोमा घ्यू र अर्कोमा साना-साना घैँटा राख्न भने। युवकले पनि त्यसै गरे। बुद्धले उनलाई ती घैँटाहरूलाई राम्ररी बन्द गरेर नजिकैको पोखरीमा लगेर राख्न भने। युवकले पनि त्यसै गरे र दुवै घैँटो पोखरीमा डुब्यो। त्यसपछि बुद्धले उनलाई एउटा मोटो लठ्ठी ल्याएर ती घैँटाहरूलाई फुटाउन लगाए। उनले पनि बुद्धले भनेजस्तै गरे।
“अब बुद्धले शान्त हुँदै भने, “मैले यत्ति गरिदिएँ। अब तिम्रा पुजारीहरूलाई बोलाउ र प्रार्थना गर्न लगाउः ‘हे ढुङ्गा, तिमी तैरिउ! हे घ्यू, तिमी पानीमा डुब!’”
त्यसपछि युवकले अचम्म मान्दै भने, “मैले बुझिन भगवान। यो कसरी सम्भव छ? यो त सरासर प्रकृतिको नियम विरुद्ध हो। ढुङ्गा पानीभन्दा गह्रौँ हुन्छ, त्यसैले डुब्छ, तैरिन सक्दैन। घ्यू पानीभन्दा हलुङ्गो हुन्छ, त्यसैले तैरिन्छ, त्यसलाई डुबाउन सकिँदैन।”
हे युवक! तिमीले प्रकृतिको नियमको बारेमा यत्रो कुरा बुझेका रहेछौ, फेरि पनि सबैको लागि लागू हुने नियमको बारेमा बुझ्न चाहँदैनौँ। यदि तिम्रा पिताले ती ढुङ्गाको जस्तो कर्म गरेको भए, तल डुब्नु स्वाभाविक हो, कसले माथि लैजान सक्छ र? यदि तिम्रा पिताले घ्यूको जस्तो व्यवहार गरेको भए, ऊ सँधै तैरिरहन्छ, कसले डुबाउन सक्छ र?”, बुद्धले भने।
‘कर्मअनुसार हामीले फल पाउँछौँ’ भनेर हामीले जबसम्म बुझ्दैनौँ, तबसम्म हामीले सँधै निराशा अनि दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। यो नै प्रकृतिको नियम हो, जुन हरेक प्राणीलाई लागू हुन्छ।